इंद्रधनुष, 'आई एम एम' मा 'एम् एम्स्टर्डम', LGBTI र3को बीच प्रतिबद्धता: मार्टिन व्रिजल्याण्ड
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	2 अगस्ट 2017 मा	• 25 टिप्पणिहरु
फिल्म त्रयी म्याट्रिक्स को पहिलो फिलिमबाट तलको दृश्यलाई सम्झना छैन। फिल्म सीरीजका डाइरेक्टरहरू Wachowski भाइहरू थिए। दुई चलचित्र निर्देशकहरू अहिले लिङ्गो परिवर्तन भएको छ। लैरीले आफूलाई आफैंलाई लाना बढाउन अनुमति दिए र त्यसपछि एन्डीको पछि लागे, जसले अब आफैं लिलीलाई बोलाउँछ। यो ट्राजेगेंडर छनौट चलचित्रको सन्देशमा पूर्णतया फिट हुन्छ, तर संसारलाई नियन्त्रण गर्ने लूसिफेरियन शक्तिको लागि पनि श्रद्धांजलि देखिन्छ। त्यो सन्देश पहिले देखि नै फिलिम सीरीज मा लुकेको थियो। यो ठूलो तस्वीर मार्फत हेर्न पूर्ण जाने र तपाईं सजग हुन छ लागि समय छ के यो transgenderism (भालू वा LHBTI आन्दोलन मार्फत प्रतीकात्मक रूप रूपमा लिङ्ग तटस्थ प्रवृत्ति, जो इन्द्रेणी) बीच सम्बन्ध, Luciferianism र transhumanism।
विशेष गरी समलैंगिक शान को यो समयमा (वा शान एम्स्टर्डम, यो अब भनिन्छ रूपमा), यो तपाईं निर्वाण र गे, लेस्बियन वा transgender गर्छ स्वीकृति संग गर्न भनेर केही पत्ता लगाउन भनेर एक रोचक विषय छ, तर एक वैश्विक पुस संग लुसिफेरियनवादको लागी कि ट्राफेनम्युमेममेन्टमा आकार लिनेछ। लुसिफरको को उपासना शब्दहरू 'म छु' ( 'म एम्स्टर्डम' फेला), इन्द्रेणी र genderneutraal- वा transgender प्रवृत्ति को अर्थ मा पाइन्छ। यसैले यो आश्चर्यचकित छैन कि लक्सीफरियन पावर ढाँचाले देखाउने फिल्मको निर्देशकले आफ्नो कामको ट्राभर्जेन्ड लिङ्ग परिवर्तनको साथमा ताल लगाएको छ। लिङ्कहरू तल तपाईंका लागि स्पष्ट हुनेछ। यस अन्तरदृष्टिको महत्त्व पनि तपाईंलाई स्पष्ट हुनेछ।
किन म म्याट्रिक्स त्रयी को पहिलो फिलिम देखि नीचे दृश्य मा विशेष रूप देखि इंगित गर्छु? खैर, हामी एक समय मा बाँचिरहेका छौं जब कृत्रिम ज्ञान र नैनोले टेक्निकल घटनाक्रममा क्वांटम छलांग ल्याउनेछ। मानिसहरू जस्तै गुगलको प्राविधिक कार्यकारी रे कुज्जविलले हामीलाई बताउँछ कि नजिकको भविष्यमा हामी भर्चुअल संसारहरू सिर्जना गर्न सक्दछौं जुन वास्तविकताबाट अलग नहुन सक्छ। यो बुझ्न, यो उपयोगी छ नोट लिन यो कसरी लगभग विकास हुनेछ। कल्पना गर्नुहोस् कि एलन मुस्क कम्पनीको दिमाग जडान नैतिकलिङ्कले चाँडै एक तथ्य बृद्धि गर्नेछ (जस्तै यहाँ साइटमा धेरै वर्णन गरिएको छ); त्यसपछि यो वास्तविक संसारसँग भर्चुअल वास्तविकता मिश्रण गर्न सम्भव हुन्छ। हामी यो प्रविधिलाई सँधै सत्यता भन्छौं। पोकिनोन गो त्यो बस एक धेरै सरल उदाहरण हो। Google ले 2015 मा, कम्पनीमा 700 मिलियन लगायतको निवेश गर्यो जादुई छलांग; एक कम्पनी जसले बढ्दो वास्तविकताको नयाँ रूप बनाउँछ। त्यसैले केही वर्षहरूमा वास्तविक विश्व संसारमा एक भर्चुअल तह राखिएको हुन सक्छ। Google ग्लास यो पहिले नै गर्न सक्दछ, तर मस्तिष्क जडानको साथ यो भिजुअल अवलोकनको लागि आँखा बाईसमा बाइपास गर्न सम्भव हुन्छ। तपाई तस्बिरहरू सिधै मस्तिष्कमा प्रोजेक्ट गर्नुहुन्छ, जस्तै यो थिए। के त्यो स्कीएफ विचार छ? हो, हामी यति सोच्दछौं, तर Google ले यसको लागि यसमा लगानी गर्दैन र रे कुर्जविलले यस्ता कुराहरू घोषणा गर्छ; मार्टिन भ्रिजल्याण्ड होइन। त्यसैले टिकट 'साजिश सिद्धान्त' छोड्नुहोस्। (लेख भिडियो अन्तर्गत जारी छ)
तर यो पनि अगाडी बढ्छ। आफ्नो कल्पना पूर्ण रूपमा खोल्नुहोस्। यदि हामी क्वांटम फिजिक्सको भौतिक विवरणहरू हेर्छौं ('साजिश सिद्धान्त' पनि होइन, शुद्ध विज्ञान), तपाईंले यो बुझ्दा मात्र महत्त्वपूर्ण छ। मैले पहिलेको लेखमा 'डबल स्लिट प्रयोग'। यो निश्चित रूपमा पढ्नको लागि पढ्न योग्य लायक छ। यसबाहेक, हामी देख्छौं कि नैनो वास्तवमा हरेक एटम र हरेक सेल पुन: उत्पन्न गर्न सक्छ। रे कुर्जीविलले भविष्यवाणी गरेको छ कि हामी मानव शरीर को अमर लाई अमृत गर्न सक्छ कि प्रौद्योगिकी को आधार मा; को लागी 2045 ले भन्यो। यो हो किनभने मानव डीएनएको मरम्मत सम्भव हुन सक्छ र पनि, उदाहरणका लागि, रोगहरू सेलुलर स्तरमा समायोजन गरेर हानिकारक हुन सक्छ। उदाहरणको लागि, क्यान्सर सेलहरूसँग सम्पर्क गर्न सकिन्छ र निकट भविष्यमा नानोबोटद्वारा सफा गर्न सकिन्छ। Kurzweil ले मात्र होइन कि हामी आफ्नै शरीर अमर गर्न सक्दैनौं, तर हामी पनि जीवित अवतारहरू गर्न सक्छौं, ताकि हामी धेरै (नैनो टेक्नोलोजिकल) एकै समयमा जीवन बिताउन सक्छौं। हामी पनि भर्चुअल संसारहरू सिर्जना गर्न सक्दछ जुन वास्तविकबाट प्रतिष्ठित हुन सक्दैन। वैज्ञानिक र भविष्यवादी मियोइओ काक (डिस्कवरी च्यानलबाट जानिएको) ले यो कथालाई विस्तृत (स्पष्ट) स्कीफाई जानकारीको एक अंश थप्छ। उहाँले सोच्नु भएको छ कि त्यहाँ प्रतिकृतिकर्ताहरू हुनेछ जसले सामग्रीको परमाणु ध्वस्त गर्न सक्दछ र तिनीहरूलाई नयाँ पदार्थको लागि निर्माण सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ। हामी यो SciFi श्रृंखला Startrek बाट थाहा छ। त्यो dematerialise र फेरि पुन: प्रयत्न गर्नुहोस् यसले भविष्यमा हाम्रो मानव शरीर ध्वस्त गर्न सक्छ र यसलाई फेरि सामंजस्य बनाउन अनुमति दिन्छ। यसले प्रत्येक फारम लिन सम्भव बनाउँछ। तपाईं पनि एक ढुङ्गा बनाउन सक्नुहुन्छ। के यो पागल हो या माइकल काकू जस्तै "पिटेको भविष्य को मूर्खतापूर्ण विचार" हो? (लेख भिडियो अन्तर्गत जारी छ)
ठीक छ यदि हामी एक कदम अगाडी जान्छौं। क्वांटम भौतिकीले यो कुरा सुनेको छ कि मुद्दा मात्र "अवस्थित" हुन्छ। यसको मतलब यो हो कि मुद्दा केवल 'सूचना' हो जुन यो देखापर्यो (डबल स्लिट प्रयोग)। सूचना हल्का वा ध्वनि लहरहरू वा कुनै पनि जानकारी-लिने माध्यम मार्फत स्थानान्तरण योग्य छ। क्वांटम entanglement ले पनि यो सुनिश्चित गर्दछ कि जानकारी हल्का साल 'विभाजित दोस्रो' मा हुन सक्छ। यो मतलब हो कि मानव शरीर को जानकारी ब्रह्मांड मा एक अन्य ठाँउ मा 'विभाजित मा' मा प्रसारित गर्न सकिन्छ र फेरि भौतिक बनाइन्छ। पहिलो विचार अर्को स्थानमा एक रेप्लिकेटर हुनु पर्छ (Michio काकु को सिद्धान्त संग लाइन मा), तर क्वांटम भौतिक बाहिर जान छ, त्यसपछि त्यहाँ पर्दैन धारणा मात्र प्रश्न हुन।
के यो तपाइँको आँखा अगाडि घुम्न शुरू हुन्छ र यस लेख को शीर्षक संग यो सबै के गर्नु पर्छ सोच्दै हुनुहुन्छ? कृपया पढ्नुहोस्, किनभने माथि उल्लेखित अवस्थाको अवस्था हामी अहिले हो भन्ने बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाईं मान्नुहुन्छ कि डबल स्लिट प्रयोग सही छ, त्यसपछि केवल हाम्रो वरपर चारैतिर सबैलाई मस्यौदाको लागि अवलोकनको लागि मात्र आवश्यक छ। छोटो समयमा, धारणाले चीजहरू ठोस बनाउँछ। जब हामी VR चश्मेहरू हालौं, हामी एकदम वास्तविक खोज भर्चुअल वास्तविकता देख्छौं। यस विचारलाई एक कदम अगाडी लैजानुहोस् र विचार गर्नुहोस् कि बढ्दो वास्तविकता तपाईंको दिमागीमा अनुमानित हुन सक्छ वा त्यहाँ प्रतिकृतिहरु हुनेछ। आभासी वास्तविकता कस्तो छ? के तपाई दृष्टान्त मान्नुहुन्छ कि Google ले भर्चुअल संसारहरू सिर्जना गर्न सक्षम छ जुन वास्तविक भाषाबाट र कुन कुन चीजहरू जुन तपाईले अवलोकन गर्नुहुन्छ त्यसलाई भौतिक रुपमा बनाउनुहुन्छ? त्यसैले तपाईं चीजहरू अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ वास्तवमा जीवनशैलीको रूपमा; देख्न र वास्तविक कुरा महसुस गर्दै; वास्तविक जंगलहरू, समुद्रहरू, नदीहरू, पर्वतहरू र जीवित चीजहरू हेर्न। तपाईं सुन्नु र गंध गर्न सक्नुहुन्छ र सबै चीज आजीवन देखिन्छ। के तपाइँ चलचित्रको बारेमा सोच्नुहुन्छ? दायाँ: म्याट्रिक्स। के हो भने तपाई पहिले नै एक भर्चुअल वास्तविकतामा एक पर्यवेक्षक हुनुहुन्छ जसमा चीजहरु लाई आजीवन बनाइएको छ? के तपाईं यो एक अजीब विचार भेट्टाउनुहुन्छ, सोच्नु भएको छ कि तपाईले भर्चुअल वास्तविकतालाई तपाईंको धारणामार्फत भौतिक बनाउँछ? चिन्ता नगर्नुहोस्; यहां सम्म कि विज्ञान यो मुद्दा संग सम्बन्धित छ। यस कागजातको बारेमा अझ बढी उत्तेजित हुनका लागि तलको कागजातमा हेर्नुहोस्। नोबेल पुरस्कार विजेता जॉर्ज स्टोट पनि एक समयमा गरे टेडी एक्स कुरा उनको श्रोताले सम्भावनात्मक सम्भावनालाई झल्काउँछ जुन हामी अनुकरणमा बस्दछौं। (लेख भिडियो अन्तर्गत जारी छ)
फिल्म त्रयी Matrix मा हामी केहि निश्चित क्षणमा देख्छौं कि नव चक्रमा देखा पर्दछ। पहिलो फिलिममा हामीले देख्यौं कि उनले पत्ता लगाए कि 'प्रकृतिको नियमका नियमहरू उल्लङ्घन गर्न सक्दछन्,' कुनै चम्मच छैन 'भन्ने कुरा गरेर। छोटो; उनले पत्ता लगाए कि गुरुत्वाकर्षण को रूप मा प्रकृति को नियम केवल अनुकरण को भाग हो। जो कोहीले चलचित्र गर्दछ भ्रमविहीन डिनोमो यो लगभग यो सोच्न सुरु हुनेछ कि यो यस संसारमा पनि सम्भव छ। मैट्रिक्स ट्रिलजी को sequels केही Masonic रहस्य म पछि फेरि छलफल, तर मुख्य प्रकाश "ठूलो architect अस्तित्व को छ प्रकट छन्; सेतो दाँतले मानिस। यो निकलिएको छ कि नेवीले सम्पूर्ण खोज र उनको पहिलो जागरण प्रक्रियाको पहिलो चलचित्र सैकड़ों पटक अनुभव गरेको छ। हामीलाई थाहा छ कि फ्रिमेसोरीमा हामी पनि 'मास्टर बिल्डर' वा 'ग्रेट वास्तुकार' को कुरा गर्छौं। को फिरऊनले bloodlines र स्याटर्न उपासना विश्वव्यापी अवलोकन छ बारे मेरो धेरै चर्चा मा (मलाई पैदा यो पनि स्याटर्न सम्प्रदाय भनिन्छ छन्) त्यहाँ उपासना लुसिफरको छ कि देख्न सकिन्छ। लुम्बफर समय भ्रम (नक्कल) को महान वास्तुकारको रूपमा। क्रान्तिस, शनि, 'समयको रक्षक' को रूपमा पनि भनिन्छ। म कहिलेकाहीँ सीडी-रोमसँग तुलना गर्दछु जसमा खेल खेलिएको छ। तपाईं खेलाडीमा सीडी राख्नुहोस् र खेल खेल्न र सबै प्रकारका साहसिक अनुभवहरू अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले तपाइँ इतिहासको अनुभव अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि खेलको सम्पूर्ण कोड पहिले नै सीडी-रोममा जलाएको छ। फिल्म त्रयी म्याट्रिक्स देखि सेतो दाई वाला व्यक्ति यसैले भविष्य भविष्य को रे कुर्जेविल (Google लाई नयाँ आभासी दुनिया को बिल्डर को रूप मा) हुन सक्छ; सेतो दाँत भएका मानिस मात्र हाम्रो वर्तमान आभासी संसारको लुसिफर हुन सक्छ। 'क्रोना', खेलको विकासकर्ता (जसले क्रोनिकलोजिमलाई प्रकट गर्दछ, तर जुन "CD-ROM मा पूर्णतया जलाइएको छ")।
Elon Musk गरेको कम्पनी Neuralink र Google को एक मस्तिष्क जडान नयाँ भर्चुअल वास्तविकता, तपाईं सबै मूर्त र सुन्दर अनुभव गर्न सक्छन् जो मा प्रदान गर्दछ र तपाईं पनि अमर हो कि निकट भविष्यमा तपाईं मानौं। तपाईं आफ्नो मूल शरीर मर्न सक्नुहुनेछ, किनकि तपाईंको मन Google को नयाँ संसारमा अपलोड गरिएको छ। त्यसपछि आफैलाई सोध्नुहोस् जसले 'स्रोत कोड' र जो सुपरस्कप्टरहरू प्रबन्ध गर्दछ जसले यस अनुकार चलाउँछ? दाँया: गुगल। म यो मात्र सम्मोहन सुझाव दिन्छु, अर्को प्रश्नमा तपाईलाई नेतृत्व गर्न चाहन्छु। कल्पना गर्नुहोस् तपाईंको प्राण पहिले देखि नै एक भर्चुअल वास्तविकतामा "अपलोड गरिएको" हो जुन वास्तविकताबाट प्रतिष्ठित हुन सक्दैन र जुनसुकै सबै चीज सम्भव छ जस्तो छ। के तपाई अहिले बाँच्नु भएको सबै वास्तविकता होइन? र सोच्नुहोस् कि संसारको रे कुर्जेइल (वा Google) ले लुसिफर नाम दिन्छ? के हुन सक्छ कि सोच को एक परिकल्पना छलांग हुन सक्छ कि तपाईं? अन्य शब्दहरुमा: के तपाई अझै पनि मलाई पछ्याउनुहुन्छ? मूलतया, एलोन मुस्कको नीरलिंकको कुनै पनि मस्तिष्कको जडान आवश्यक पर्दछ। त्यो केवल एक टेक्निकल मध्यवर्ती चरण हो। क्वांटम भौतिकीले सिकाउँछ कि सामग्रीले मात्र यो धारणामा ढाँचा दिन्छ। त्यसैले यदि तपाईंको आत्मा लुसिफरको भर्चुअल वास्तविकताको निरीक्षक हो भने, ब्रह्मांड (र सबै चीजहरू र सबैजना) ले लुसिफरका नियमहरू भित्रको वरिपरि भौतिक बनाउँछ। "म्याट्रिक्स निर्माण हो"। यसकारण मैले वास्तविकतालाई उल्लेख गरें जसमा हामी बाँच्न सक्छौं आत्मा आत्मा.
तपाईं, तपाईं मात्र लुसिफरको गरेको (यस "भर्चुअल वास्तविकता" को ठूलो नाम पढ्न भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं प्रतीकात्मक रूप र 1 संसारमा धर्म मा मिश्रण तिर सबै दुनिया को धर्महरुलाई लुसिफरको आदर को Roadmap अध्ययन यहाँ)। लुसिफरको एक धेरै महत्त्वपूर्ण प्रतीक इंद्रधनुष हो। एक मसीही पृष्ठभूमिको साथ निश्चित रूपमा 'त्यहाँ आशा' स्टिकरहरू सम्झन्छन्। कम से कम मैले गरे, किनकि मेरो बुबाले सधैँ आफ्नो कारमा फँस्यो र मैले फेरि फेरी फर्काएँ। इंद्रधनुष पनि ग्रीनस्पेसको प्रतीक हो र अहिलेको एलजीआईटीआई दृश्य र समानुभूति गर्व हो। तर के वास्तवमा इन्द्रेणीको लागि के हो? सबैले पुरानो करारको लेखबाट नूहको कथालाई थाहा छ। यो कथा केवल ईसाई धर्ममा मात्र होइन, तर वास्तवमा सबै प्रमुख विश्व धर्म र पौराणिक कथामा। हामी Sumerian माटो ट्याब्लेटको को प्रकाश मा नूहको कथा राख्न र वेस Penre जस्तै मान्छे (जसलाई म सबै दर्शनहरू amening छैन) द्वारा पुन: अध्ययन यसलाई हामी अचानक जहाँ इन्द्रेणी प्रतीकात्मक रूप लागि खडा छ बुझ्छु।
वेस पेनरले उनीहरूको अध्ययनमा बताउँछन् (हेर्नुहोस् यहाँ en यहाँ) कि सिमेरियन माटो ट्याबलेट, जुन अध्ययन गरिएको थियो र जकरिया सिचिन द्वारा वर्णन गरिएको थियो, हेगलियन डिजिकेटिक अब हामी के इतिहास को झूठाकरण र धारणा प्रबंधन संग मीडिया मा देख्न सक्छौं। छोटो; Sitchin को ट्याब्लेट र शाब्दिक जस्तै वेस Penre माटोलाई पाटीमा थियो के स्वीकार गर्न सत्य "" सबै कुरा शाब्दिक भन्दा गरिरहेको लाइनहरु 'बीच पढ्नुहोस् "गर्न बुद्धिमानी विकल्प रहेको मान्छे लिए। वेस पेनर विन्स्टन चर्चिल को सिद्धान्त को बुझ्यो, अर्थात् इतिहास इतिहास विजेता द्वारा लिखित छ। त्यो, उनको अनुसार, Sumerian मिट्टी ट्याब्लेटमा पनि लागू हुन्छ। यसलाई आफ्नो अध्ययन को सही विवरण बारम्बार धेरै टाढा जान्छ, तर Enki को काम नस्ल मानिसहरूलाई सिर्जना लागि पाटी को आरोप मा थियो के यो तल आउँछ। यो पहिलो पहिलो अहिंसा (निस्सन्देह) मानिस थियो। एक व्यक्ति जो रोपण गर्न सकेन (हामी 'लिंग तटस्थता' को वर्तमान प्रवृत्तिको पहिलो संकेतहरू पहिचान गर्दछौं)। पहिलो मानिसको प्रजननको लागि, 'देवता' को मातृभाषा प्रयोग गरिएको थियो। पछि, "देवता" ले यस प्रजाति को विभिन्न प्रकार को एक प्रजाति को पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय गरे जो स्वयं को पुन: पेश गर्न सक्छ। त्यो के 'आदमको शरीरबाट रिब' हो भनेर उत्पत्तिको बाइबिल पुस्तकबाट उल्लेख छ। Wes Penre अब यो बताउँछ कि मानिसको आत्मा मूल मूल हो, बाहिर बाहिर (जस्तै मैले यो कल) यो सिमुलेशन। यस सिमुलेशन भित्र मनुष्यको प्रयोग र भौतिककृत "भर्चुअल वास्तविकता" अवलोकनमा "पृथ्वी" भनिन्छ, एक प्राकृतिक प्राकृतिक आपदा द्वारा समाप्त हुनेछ। यो कसरी Sumerian माटो ट्याब्लेट र अनुवाद वेस Penre कारण यो प्राकृतिक प्रकोप, म विचार बाहिर छोड्ने, तर हामी पृथ्वी भर थियो पानी को ठूलो रकम कम्तिमा सबै कहानी थाहा छ। नूहको सन्दूकले मानव डीएनए र सबै जीवित प्राणीहरूको डीएनए संरक्षित गरेको थियो। यस संरक्षणको लागि जिम्मेवार व्यक्ति, जसको लागि आधा-मानिस देवता (एकीका छोरा) नूह प्रयोग गरिएको थियो, एकी थियो; लुसिफरको लागि शमेरियन नाम। र त्यस बाढीको प्रतीक 'इंद्रधनुष' हो। इंद्रधनुषले यसरी 'म्यान' भनिने आनुवंशिक प्रयोगको संरक्षण र लुसिफरियन सिमुलेशनको संरक्षण (मलाई आत्माको जेल भनिन्छ) को प्रतीक हुन्छ।
ठूलो प्रतीक जसमा सबै तीन लुसिफरियन पहलहरू सँगसँगै आउँछन् म एम्स्टर्डम लोगो। यो किनभने किनभने 'आई एम' शब्द इंद्रधनुष रंगहरूसँग हस्तक्षेप गरिएको छ। म ख्रीष्टियन उत्थानको साथ व्यक्तिलाई चिन्न सक्छु। म हुँ, YHWH वा Yova को लागि खडा छ; बाइबिलको देवता बाइबल वास्तवमा एक बेग्लै पुस्तक हो भने यदि तपाईंले Sumerian मिट्टी ट्याब्लेटको अध्ययन र उदाहरणका लागि Wes पेनरको काम नगर्नु भएको छ। यदि तपाईंले तिनीहरूलाई अध्ययन गर्नुभएको छ भने, तपाईंले पत्ता लगाउनुहुनेछ कि पाठहरू जस्तै 'परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो छविमा मानिसहरूलाई बनाउनुहुन्छ"अचानक स्पष्ट भयो। एक देवताले आफैलाई कसरी बोल्न सक्छ? खैर, मिट्टी ट्याब्लेटले वर्णन गरेका छन् कि त्यहाँ धेरै "देवता" थिए। बाइबलको ईश्वर यसैले 1 भगवान होइन, तर त्यहाँ सधैँ विभिन्न क्यारेक्टरहरूको सन्दर्भ हो (जो माटो ट्याब्लेटहरूमा उभरन्छ)। बाइबलले 1 आशामा फसेको कथाहरू र पात्रहरूको मिश्रण हो। बाइबलको ईश्वर वास्तवमा सिमेरियन मिट्टी ट्याब्लेटको एकी र शैतान (ईडनको बगैचाबाट सर्प) इन्कीको छोरा मार्डुक हुनुहुन्छ। बिना यो विस्तृत गर्न को लागी, यो जान्न महत्त्वपूर्ण छ कि 'म' सुरु र अन्त को भगवान को लागि खडा छ; अल्फा र ओमेगा; वा भर्चुअल वास्तविकताको सम्पूर्ण CD-ROM; शनि (क्रान्तिस, समय भ्रम); तपाईं ख्रीष्टियन गीतहरूको 'म महान हुनुहुन्छ म' हुँ (तल भिडियो हेर्नुहोस्); 'म हुँ' बाइबलबाट: लुसिफर।
इंद्रधनुष लुइसफरको प्रतीक हो; 'म हुँ' लुसिफरको लागि उभिएको छ र 'ट्रांसगेंडरवाद' वा 'लिंग तटस्थता' लुकाफरको लागि खडा हुन्छ। मात्र होइन (यौननिर्मित) 'देवता' को पहिलो प्राणीको यौन अवस्था हो, तर यो पनि हेरोमरोडाइट बाफमितको लागि खडा छ; छाती र एक पुरूष जननाथसँग भएको रकम। गीलीटी / मकाउबा लुसिफरको लागि खडा हुन्छ र विशेष गरी दक्षिण अमेरिकामा सम्मान गरिएको छ। गीताटी ब्रान्डले पुरुषहरूलाई उनीहरूको शरीरको कपाल छाड्न अनुमति दिन्छ। लुसिफेरियनवादमा मानिसले स्त्रीलाई (र यस प्रकारको डिपिटिभिटी) र पुरुषको तिर फेरि पछाडि ल्याउनुपर्छ। मैले मेरो आलेखमा यो सबको बारेमा व्याख्या गरे Conchita Wurst (यूरोविजन साङ्ग प्रतियोगिता प्रतियोगिता 2014 को विजेता / विजेता ट्राजेगेंडर)। पढ्नुहोस् यो लेख कसरी म, transhumanism को चरण कि transgenderism (इन्द्रेणी LHBTI आन्दोलन) व्याख्या singularity को परम उद्देश्य संग: कृत्रिम बुद्धि संग मानिसहरूलाई को फ्युजन। यसका सबै प्रतीकमा छिटो शनि पूजा गर्ने अभ्यास गर्ने फराओनिक-बाबुलियन अभिजात वर्ग यस लुसिफेरियन सडक नक्सा पछि ड्राइभिङ्ग बल हो। The प्रचार इंद्रधनुष माफिया भनेको लुसिफर म्याट्रिक्स 2.0 को लागि अर्को पीढी तयार गर्न हो।
एम्स्टर्डम लिङ्ग-तटस्थ भाषण आधारित सोचको साथ सुरु हुन्छ
Vrouw.nl मा LGBTQ प्रचार? कथा: मुकदमेकी छोरी लिङ्ग तटस्थ छ
ट्याग: एम्स्टर्डम, अर्थ, बाइबल, त्यहाँ आशा छ, विशेष, समलिङ्गी, लिंग तटस्थ, तलवण्डी साबो को गियाना, म हो, IAmsterdam, LHBTI, लोगो, लुगेरिया, म्याट्रिक्स, गर्व, इंद्रधनुष योद्धा, इंद्रधनुष, शनिन, स्टिकर, ट्रान्सगेंडर
2 अगस्ट 2017 मा 15: 10
त्यसैले यदि म बुझ्न राम्रो लुसिफरको मार्टिन को गर्भनाल (kwantumvestrengeling) अन्तिम कट र हामीलाई मानिस तीन-आयामी वास्तविकता मानते जहाँ एक संकुचित एक-आयामी वास्तविकता फन्दामा राखन चाहन्छ?
- feminism, परिवार नष्ट (वर्ष 50, 60 र 70)
- समलैंगिक अधिकार, ट्रांहमेमेनमैन (वर्ष 80 र 90) को प्रचार
- ट्रान्सगेंडर, लिंग परिवर्तन पुरुष / महिला र यसको विपरीत (वर्तमान मिलनियम)
- एन्ड्रोइड मैन जन्मेको छ र ग्रूगल्स ब्रान्डमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ (प्रगतिमा ... 2030-45?)
2 अगस्ट 2017 मा 15: 21
यो पनि उल्लेखनीय छ कि नाम Google को 'Googol' को व्युत्पन्न हो
Googol 1 को लागि 100 को लागि गणितीय शब्द हो, अन्य शब्दहरुमा: 10¹ °° अन्य शब्दहरु अनंत संभावनाहरु मा।
के तपाईं निमड्रडको शपथको साथ परिचित हुनुहुन्छ त्यो पहिलो freemason को रूपमा देखा छ? :
सच्चाइ यो हो कि फ्रिमेसोनेरी सधैं ईश्वर विरुद्ध बाढी विद्रोह पछि धेरै नजिक भएको छ। निम्रोद एक दमनकारी र एक शुद्ध वा झूटा धर्म थियो। धार्मिक प्रणालीको तत्व जसले नीम्रोडले प्रायः प्रत्येक प्रमुख विश्व धर्ममा स्थापना गर्यो। हाम्रो केहि भन्दा अधिक पुरानो छुट्टियों को परंपराहरु लाई प्राचीन बाबुल र निमोरोमा जान सकिन्छ। एक पटक जब तपाइँ पुरातन बाबिलोन रहस्य धर्मका तत्वहरू पत्ता लगाउँदा, तपाईंले पत्ता लगाउनुभयो कि तिनीहरू प्राय: प्रायः आधुनिक संसारमा हुन्छन्।
धेरै क्षणबाट "प्रारम्भिक निमडुड" ले प्रारम्भ गरेको छ, मौलिसहरू पुरातन बेबिलोन रहस्य धर्मको आधारमा एकदमै शक्तिशाली गहिरो संसारमा फसेका छन्। सच्चाइ यो हो कि फ्रिमेसोसोरी बाइबल को भगवान संग केहि गर्न को लागी छैन।
बरु, यो "न्यू वर्ल्ड अर्डर" सँगै गर्नु पर्छ जुन निम्रोड मूलतः चाहिएको थियो र लूसिफर अझै पनि अस्तित्वमा ल्याउन प्रयास गरिरहेको छ।
2 अगस्ट 2017 मा 15: 34
परम्परा अनुसार, निमरोड 25 दिसम्बर (क्रिसमसको), उनको प्रतीक = एक्स मा जन्मिएको थियो
2 अगस्ट 2017 मा 21: 50
ब्याकट्र्याक गरौं र हेर्नुस्। यदि हामी निम्रोडको साथ सुरू गर्छौं- यो यो व्यक्ति हो? बाइबल, जुन पुरानो पुरातन ग्रन्थहरु को एक पुनर्गठन हो, जसले हामीलाई बताउँछ कि निमोडको नूहको महान-पोति थियो। यसले उसलाई एक संकर राजा बनाउनेछ, होइन? आधा एन.की रगत र आधा मानव, यदि हामी यसलाई दिइएको छ भने नूहका छोराहरू र पोतीहरूले रगतलाई "स्वच्छ" राखे। इमानदारीसाथ, यो तिनीहरूले के गरे। प्रश्न हो, निम्रोद साँच्चै नै नूहको पातलो थियो?
हामी रेकर्ड हेर्न भने, हामी यसलाई usefull वा तिनले "ठूलो" वा थियो त्यो बारम्बार त्यो हेर्न "शक्तिशाली शिकारी,"  कति अनुयायीहरूलाई Ninurta र देवी आमा को लागि शीर्षक हो। हामी Ea जब उहाँले शास्त्री बाबेलको इतिहास लेखन थियो धेरै personae मा फायर त्यो बुझ्न knowthat दुई को कुनै पनि सट्टा समयमा यहाँ थिए। अरूलाई आफूलाई "ठूलो शिकारी।" "को मा (यहूदी" मौखिक टोरा ") शक्ति मानिसको रूपमा भनिन्छ पनि, निम्रोदको को" Tanakh "मा चित्रण गरिएको छ Ninurta र देवी समयमा दुवै को वर्ण मा निकाल, र वा मा पृथ्वी। " शक्ति को मान्छे" पृथ्वीमा "(को Underworld) Nergal / En.ki. थियो त्यसपछि, निम्रोदको धेरै अनुयायीहरूलाई राजा भएको मानिन्छ थियो कसरी Shinar, थियो, रेकर्ड, मेसोपोटामिया केही नतोकिएको क्षेत्र,  मा बाजा कुरा त, अर्को शब्दमा, उहाँले एक Sumerian राजा थियो।
यो एक साथ रहस्यमय तरिका ओरियन ईश्वर ईआमा जस्तै जस्तो लाग््छ। "संकेत" अझै पनि रेकर्डमा छन्, जस्तै हामी देख्न सक्छौं, तर तिनीहरू ओभरराइड छन्, निम्रोड सहित नूहको सन्तान हुन्छ, र यसैले एक हाइब्रिड राजा। त्यसकारण, बाबेल घटनाको टॉवरले हाइब्रिडलाई दोषी ठहराउँछ जुन फारमको वर्णनमा कहिल्यै अस्तित्व भएको छैन, र बाइबिलको "परमेश्वर" दोषी थियो जसले मानिसहरूलाई विभिन्न भाषाहरूमा विभाजित गर्यो।
त्यसोभए, बाढीबाट पहिले, जो अझै ओरियन भाषा (र केहि अवस्थाहरुमा, टेलिपाथी) थियो निरुरुता र खान एनिलिल द्वारा प्रिमर्डियल Namlúu मा सिकाइएको? बाढी पछि, एक नयाँ मान्छे को निर्माण, जसलाई उनले कुल नियंत्रण चाहते हो, यो आसान नहीं नियन्त्रक को लागि यदि त्यो एक भाषा बाधा को रूप मा एक साथ शामिल हुन सक्दैन सजिलै संग? त्यसोभए, यदि हामी संकेतकहरू हेर्छौ, कुन राजा निमोरोले हुन सक्छ भनेर सुझाव दिन्छ, हामीसँग हाम्रो निश्चित प्लेन छ।
बाबेलका सम्पूर्ण टावरले सम्बोधन गर्न सक्दथे, सम्भवतः, यदि हामी यी निष्कर्षहरूमाथि विश्वास गर्छौं, ईए मानिसहरूको दुवै पक्ष खेल्नु र जब तिनीहरू आउँथे ज्ञान गर्न। यो समस्या समाधान गर्नको लागि डीएनए को एक समायोजन ईए को लागि उपयुक्त हुनेछ। आखिर, यो कसले उग्रै भयो जब मानिसहरूले परमेश्वरका टावरको निर्माण गर्न थाले? वैसे, पुरानो नियमको अनुसार, यो आफैले भगवान थियो जुन क्रोध भयो, र उनको समाधान भाषाहरू भ्रष्ट थियो। त्यसोभए, पुरानो नियमको "भगवान" को थियो? वास्तवमा, यो लुसिफर थियो / En.ki / ईए!
निमरोडको सहमती सेमेरामिमेन्ट  को भनिएको थियो, र यदि हामी यसलाई अनुसन्धान गर्छौं, यसले यसो भन्छ कि यसको सहकार्य अश्शूरको राजा निनस थियो। यदि, राजा निनस को थिए? जब मैले हेरे, मैले पाए कि केही रेकर्डमा, निनस निम्रोदको रूपमा एकै व्यक्ति हो,  जसले एन.केकी आफूलाई (अधिक सिंक्रेटवाद) जस्तो देखिन्छ जस्तो देखिन्छ।
तर त्यहाँ धेरै छ। सेमिरामिइसको बारेमा बिर्सनु हुँदैन। उनी को थिए? मलाई शर्त छ कि धेरै कम पाठकहरूले उनको बारेमा सुनेका छन्। अब, हामी त्यो राजा Ninus निम्रोदको थियो, र निम्रोदको En.ki छ निष्कर्षमा पुग्न भने, त्यसपछि Semiramis हुनुपर्छ या त ereshkigal, को Underworld, वा Isis / Inanna को रानी / Ishtar किनभने थियोसिस दुई देवी आफ्नो मुख्य consorts थिए हामी पहिले फेला पारेका छौं रूपमा ।
(तल लेखमा 'निमड्रर्ड' शब्द प्रविष्ट गर्नको लागि तपाइँको भाइरसको खोजी शब्द प्रयोग गर्नुहोस्)
2 अगस्ट 2017 मा 22: 04
छोटोमा: निमोड्रो लुसिफर हो
2 अगस्ट 2017 मा 20: 48
यो लेख पढ्दा, बाबेलियन ग्रैंडमास्टर निम्रोद पनि मलाई आए। को Freemasons-छोरा Tammuz, शरीर एक मुख्य पात्र रूपमा प्राकृतिक छ, येशूले लेखन (कैसर / फिरऊनले) मान्छे एक sinister योजना तैयार छन् रगत पिउने र खाने मानव शरीरमा Satanists को निर्वाचकगण मा सोधे। र त्यो चरित्र कुख्यात लुकाइरह र सृष्टिकर्ता भएको छ जसले ब्लूप्रिन्ट र सृष्टिको मूल बदल्न हरेक 'नयाँ' बनाउनेछ र सृष्टिको मूल र तिनीहरूले यसलाई कडा मेहनत गरेका छन्। यी 'पुरानो' विश्व अर्डर र सिर्जना आफ्नो उपस्थिति केही लागि क्रूसमा गरिएन र तन्त्रमन्त्रमा समूह, एक पत्नी र छोराछोरीलाई बिना आफ्नो भूमिका मोडेल (कैसर / ख्रीष्ट), आदर्श सिर्जना, सुरु मरेका (कट) मा descended नयाँ अप गर्न ' "(धेरै अगमवक्ता कृत्रिम) जीवन जागृत हुन। त्यस पछि क्यारेक्टर देखा पर्न सक्छ (भौतिकवादी) र गायब (डेमोरेट)।
2 अगस्ट 2017 मा 16: 46
मलाई लाग्छ कि राम्रो सारांश हो हाँ
2 अगस्ट 2017 मा 23: 34
@Martin, त्यसपछि निम्रोदको को humanisation / पृथ्वी कालो प्राण मा लुसिफरको / सैतानको सृष्टि हो र अर्को "मसीह" वा गलत मुक्तिदाता, पृथ्वीमा लुसिफरको को "पूर्वजन्ममा" हुनेछ। पीईटी बट2को अन्तमा हेर्नुहोस्। तपाईं ओसीरिसको कथामा पुनरुत्थानको कथा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ।
3 अगस्ट 2017 मा 00: 45
त्यो सबै प्रकारको नामहरू पछि लुकेको छ:
"शैतानको सबैभन्दा राम्रो चाल तपाईंलाई मनाउन चाहन्छ कि उहाँ अवस्थित छैन"
2 अगस्ट 2017 मा 17: 45
मानिसहरूले ट्रागगेंडर प्रबर्धन ग्याँसलाई धक्का दिन्छन् ... gadverdamme ????
र महिलाहरुको लागि युरोपियन चैंपियनशिप पनि एक अन्य प्लेटफार्म हो जुन GAYlgbtq (!?) गौरव संग राम्रो तरिकाले सम्बद्ध छ, संयोगले सोचेको छैन। हल्याण्ड (नीदरल्याण्ड होइन) मा छोटो घृणित अवस्थाहरु ????
2 अगस्ट 2017 मा 17: 49
टेलिगेंडर शेर आफ्नो गोर्खामा नछोड्नुहोस् ... नेदरल्यान्ड्समा शेर / शेरोन लाइभ लाइभ गर्नुहुन्छ? हजुरमा
2 अगस्ट 2017 मा 18: 07
जर्मनहरूले नर्सरी 'दास' को व्याख्या को लागी मामलाहरु को जान्दछन् .. यो मलाई थप जान सक्छ कि उनि के आविष्कार गर्छन
4 अगस्ट 2017 मा 00: 42
उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईन्छ।
2 अगस्ट 2017 मा 18: 24
चाँडै 020 मा lkkr आभासी bbqs र तपाईंसँग अजीब, माध्यम र राम्रो तरिकाले गरे छनौट ... lkkr मान्छे ???? कि 5g आओस्
2 अगस्ट 2017 मा 18: 32
म भित्तामा छक्क परेँ जुन उत्सव र भेडाले स्टेडियमको भित्र र बाहिर जान्छ। एक शब्दमा अद्भुत ??
2 अगस्ट 2017 मा 19: 13
@Rifian ले यसको बारेमा पहिले पोस्ट गरेको छ, यससँग:
खैर यहाँ उत्तरमा तिनीहरूले पहिले नै प्रयोग सुरु गरेको छ र यसका लागि गाय प्रतिक्रियाहरू म तपाईंलाई बताउन सक्छु। darn राम्रो मा रहेको छ के द्वारा म ग्रोनिङजेन र Friesland बोल्न भन्दा र निरुत्साहित गर्ने बासिन्दा र किसान आइरिस / विशेष कुखुरा किसानहरु तिर सरकार द्वारा संचालित। यो पाठ्यक्रम एजेन्डा 2030 को नस मा पूर्ण फिट, त्यसैले जनसंख्या अन्ततः यसको आफ्नै आय प्रदान गर्न सक्दैनौं एक केन्द्रीय अधिकार सुम्पिएको र यसैले छ वा। खाना। नेदरल्यान्डमा मात्र समस्या भनेको त्यहाँ कुनै संगठित प्रतिरोध छैन, अधिकांश मानिसहरू आफैले कुनै पनि नतिजाहरू व्यक्त गर्न हिम्मत गर्दैनन्।
2 अगस्ट 2017 मा 19: 25
हामी एक चोटि नभएसम्म हामी घुमाउन सक्छौं, तर नेदरल्यान्ड्स मात्र एक प्रहरी राज्य पोष्ट हो
2 अगस्ट 2017 मा 20: 03
नीदरल्याण्ड एक चुप डिकेन्टिटी हो !!!
2 अगस्ट 2017 मा 20: 23
Willminblik, बायाँको लागि thx थाह थिएन कि5मा उत्तर पहिले त्यो थियो! हो यो किसान denhaag को बाटो मा खडा र एक पटक फेरि ती अन्डा घोटाले हेर्न brussel..dat छन् मलाई स्पष्ट छ, तिनीहरूले सबैभन्दा scrag चाहनुहुन्छ वा उत्तर (स्कैनडिनेविया) गर्न सरेको छ। सबै पोर्न अश्लील
ग्रोनङन ईओमा सबै भूकम्पको कारण हो कि आधिकारिक कथामा शंका गर्न पनि Google को डेटा केन्द्रहरु groningen..begin को लागी उल्लेख गर्न। यो पनि अमेरिकाको गहिरो राज्य र हार्पर प्रयोग गरेर nl को बीच उच्च स्तर मा एक सहयोग भएको हुन सक्छ। त्यसैले तिनीहरू ती केन्द्रहरू यहाँ स्थापना गर्न सक्नेछन्। बक्स बाहिर सोचे
2 अगस्ट 2017 मा 19: 14
यदि घटनाक्रम धेरै छिटो जान्छ भने, बेबेलोनियर्स आफैले आफुको सिर्जनाकर्ता लूसिफरलाई म्याचको रूपमा अपलोड गर्न सक्दछ। यो राम्रो हुनेछ, हामी अन्ततः आशा छ कि तिनीहरूबाट टाढा छौँ।
मलाई विश्वास छैन कि बेबिलोनियर्सले मनमा भेडाको अमरता छ। यो जीवित रहने गरी बाबेलियनहरूको सेवा गर्न चाहिएको भेडा अनैतिकतामा चासो छ कि यो देख्न बाँकी छ।
2 अगस्ट 2017 मा 21: 19
अमरता सासुज हो जसले सबैलाई उठाइनेछ र धार्मिक भविष्यवाणीहरू पूरा गर्दछ (केवल एकदम फरक छ, किनभने उनी हेगेलियन डिजाटिकको सेवा गर्छन्)। लूसीफरले आफैलाई मसीहको रूपमा प्रस्तुत गर्नेछ र अमरताले मानिसहरूलाई बाँधेर सिंगलत्वलाई पनि खिच्दछ।
3 अगस्ट 2017 मा 08: 29
म सहमत छु। सूची र धोखा तिनीहरूको लागि अजीब छैन र तिनीहरू निरन्तर नियन्त्रण र शक्तिसँग व्यस्त छन्।
3 अगस्ट 2017 मा 10: 02
3 अगस्ट 2017 मा 22: 49
राम्रो भनिएको छ, धन्यवाद, आजको हावा "सामान्य" हो जुन तपाईंको सामान्यतया सहमत छ र सबैले सोचेको छ कि CO2 समस्या हो, हा हा हा, मौसम परिवर्तन? द्वारा Co2, मजाक
IAM STERDAM मा, उनीहरु नयाँ बच्चाको जन्ममा कुनै लिङ्गको उल्लेख गर्नुहुन्न।
3 अगस्ट 2017 मा 11: 34
अमेरिकी ट्राग्जन्डम्यान टेरिस्तान रेज र उनको साथी बफ चोपो एक स्वस्थ केटाको आमाबाबु बनेको छ।
प्रेन्जेन्सीमा तयारी गर्नुहोस्
Trystan, अब 34 वर्ष, एक केटीको रूपमा जन्मिएको थियो। उनले दस वर्ष पहिले एक हार्मोन थेरेपी शुरु गरे, तर आफ्नो मूल अभिव्यक्ति बरकरार राखे। यो तरीका Trystan हाल अझै गर्भवती हुन सक्छ।
« फेसबुकमा रोबोटहरू झुकाएर: ए ए र मानवतासँग बायोट्रट्रियम खतरा?
निर्णायक विरासत रोग 'काटिएको'! डीएनए संग टिंकिंग ट्रांसहमन मानव को शुरुवात? »
कुल भ्रमण: 13.835.309
मार्टिन भिजल्याण्ड op छापा सुरु भयो? साइंसलाई एलेन बोर्स्ट / बार्ट भ्यान यू केसमा आधारित 2018 मा साइकोल्यान्सलाई पहिले नै हरित प्रकाश दिइयो
क्यामेरा2op छापा सुरु भयो? साइंसलाई एलेन बोर्स्ट / बार्ट भ्यान यू केसमा आधारित 2018 मा साइकोल्यान्सलाई पहिले नै हरित प्रकाश दिइयो
चेकिन्या op नाजी जर्मनी भन्दा नराम्रो पुलिस राज्य भेडाको लुगामा ब्वाँसो जस्तै देखिन्छ र तपाईंले देख्नुहुन्न